အရည်အသွေးမြင့် SYGAV Android ကားစတီရီယိုရေဒီယို 2014-2017 အတွက် Mitsubishi Lancer EVO X Ralliart with OEM Rockford Fosgate System 10.1 HD touchscreen GPS လမ်းကြောင်းပြ ကြိုးမဲ့ CarPlay WiFi Bluetooth 5.0 စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူများ | SYGAV
SYGAV Android ကားစတီရီယိုရေဒီယို 2014-2017 အတွက် Mitsubishi Lancer EVO X Ralliart OEM Rockford Fosgate System 10.1 HD ထိတွေ့မျက်နှာပြင် GPS လမ်းကြောင်းပြ ကြိုးမဲ့ CarPlay WiFi Bluetooth 5.0
DVD လမ်းညွှန်မှုအတွက် Android ကိုအသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသလား။ ရိုးရာတွေထက် အားသာချက်တွေက ဘာတွေလဲ။
1. DVD လမ်းကြောင်းပြခြင်း၊ ရရှိနိုင်သောစနစ်များမှာ WinCE နှင့် Android စီးရီးနှစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘုံလမ်းကြောင်းပြကိရိယာသည် WinCE စနစ်ကို အသုံးပြုသည်။
2. WinCE စနစ်၏ လမ်းညွှန်မှုသည် အတော်လေး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ပြီး ပလပ်ဖောင်းသည် အလွန်ရင့်ကျက်ပါသည်။ Yuanfeng ကဲ့သို့သော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လမ်းညွှန်မှုဆိုင်ရာ ဟာ့ဒ်ဝဲပလက်ဖောင်းအများအပြားသည် ၎င်းနှင့် နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြသည်။
3. စမတ်ဖုန်းများ သို့မဟုတ် တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာများကဲ့သို့သော မိုဘိုင်းလမ်းကြောင်းပြခြင်းနယ်ပယ်တွင်၊ Android ပလပ်ဖောင်းကိုအခြေခံ၍ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောလမ်းကြောင်းပြခြင်းမှာလည်း အသုံးများသည်။
4. Android ၏ အားသာချက်မှာ ၎င်းတွင် အတော်လေးပြည့်စုံသော မာလ်တီမီဒီယာ ပံ့ပိုးမှုပါရှိသည်။ လက်ရှိပံ့ပိုးပေးသည့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်အပလီကေးရှင်းများသည် WinCE ပလပ်ဖောင်းထက် များစွာပိုမိုအဆင်ပြေပါသည်။
5. သို့သော် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လမ်းညွှန်မှုပေးသူများအတွက် WinCE သည် ပိုမိုရင့်ကျက်ပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်သည်။ မာလ်တီမီဒီယာအတွက် WinCE စနစ်၏ ပံ့ပိုးမှုသည် ယုတ်ညံ့ခြင်းမရှိပါ။
6၊ အဓိကဆော့ဖ်ဝဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဒိုမိန်းနှစ်ခု (WinCE ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီသည် Microsoft ဖြစ်ပြီး၊ Android ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီသည် Google) သည် ခွဲ၍မရနိုင်ပါ။
7. WinCE စခန်းထုတ်ကုန်ကို သင်ရွေးချယ်ပါက၊ သင့်တွင် အနည်းဆုံး ဗားရှင်း 6.0 နှင့်အထက် ရှိရမည်၊ အကယ်၍ သင်သည် Android စခန်းထုတ်ကုန်ကို ရွေးချယ်ပါက၊ သင့်တွင် အနည်းဆုံး ဗားရှင်း 4.0၊ ပင်မအနိမ့်ဆုံး လိုအပ်ချက်ရှိရမည်။
8. အစိမ်းရောင်နဲ့ မုန်လာဥနီတွေမှာ သူတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ အကြိုက်တွေအရ ရွေးချယ်ပါ။ WinCE သည် Windows စနစ်နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး Android သည် Linux နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
9. Android စနစ်၏ လမ်းညွှန်မှုတွင်၊ အသုံးပြုသူများသည် ဆော့ဖ်ဝဲလ်များစွာကို မသိလိုက်ဘဲ ထည့်သွင်းခြင်း၊ အချင်းချင်း အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ချို့ယွင်းချက်များကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ စနစ်ကို သန့်ရှင်းအောင် ဂရုစိုက်ပါ။
10. WinCE သည် navigator ၏ ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ထက် များစွာနည်းသော လိုအပ်ချက်များ နည်းပါးသောကြောင့် ၎င်းသည် စိတ်တစ်ခုတည်းဖြင့် လမ်းညွှန်နိုင်ပြီး အတော်လေး တည်ငြိမ်သည်။ မကြာခဏ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
ယခင်- SYGAV Android ကားစတီရီယိုရေဒီယို 2008-2017 အတွက် Mitsubishi Lancer EVO X Ralliart OEM Rockford Fosgate စနစ် 10.1 HD ထိတွေ့မျက်နှာပြင် GPS လမ်းကြောင်းပြခြင်း ကြိုးမဲ့ CarPlay Android Auto WiFi Bluetooth 5.0
နောက်တစ်ခု: SYGAV 10.2 အတွက် Android ကားစတီရီယိုရေဒီယို 2013-2015 Nissan Altima GPS လမ်းညွှန် CarPlay Android Auto WiFi Bluetooth